Lavin’i Cui Jian, Kintan’ny Rock Shinoa, Ny Hihira Eo Ambany Sivana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Janoary 2014 1:34 GMT
Toa sahala amin'ny tsy handray anjara amin'ny ‘gala’ mandritry ny fetin-dohantaona amin'ity taona ity ilay kintan'ny rock shinoa, Cui Jian, noho ny fitakian'ny manampahefana hanivànany ny tononkirany.
Nisy ny sahoan-dresaka mikasika ny fandraisana anjaran'i Cui amin'ny fetin-dohantaona hatrany amin'ny fiandohan'ny Janoary. Tany ampiandohan'ity herinandro ity, nilaza tamin'ny New York Times ny mpikarakara manokana an'i Cui fa mety hiaka-tsehatra i Cui raha toa ka tsy misy fitakiana hanesorana amin'ny tononkirany.
Nahataitra ny maro ny fanasana azy hiaka-tsehatra amin'ilay fetin-dohantaona noho ny toerany mahatonga resabe ao Shina amin'ny maha-mpihira rock azy. Lasa hira faneva ho an'ireo hetsi-panoheran'ny mpianatra tao amin'ny Kianja Tiananmen tamin'ny 1989 ny hirany “Tsy Misy Amin'ny Anarako – Nothing to My Name”. Tany amin'ny taona 1990, noraràn'ny governemanta ny fiakarany an-tsehatra tamin'ireo tranobe fanaovana fampisehoana noho ny tononkirany miatyresaka politika
Fonon'ilay CD “nothing to my name” an'i Cui Jian
Ny Seho An-tsehatry ny Fetin-dohantaona no fialamboly be mpankafy indrindra ao Shina satria efa fomban-drazan'ny Shinoa ny miaraka amin'ny fianakaviana mijery izany ny Alin'ny Taona Vaovao Shinoa.
Kanefa, tsy mahasarika ny tanora intsony ilay seho tato anatin'ny taona vitsivitsy noho ny fisehoana an-tsehatra atao ao lasa diso mamofona fitiavan-tanindrazana loatra sy ny fitomboan'ny fialamboly ety anaty serasera. Betsaka no mihevitra ilay fanasàna an'i Cui ho toy ny ezaka hamelomana indray ilay fety.
Naneho fihetsehampo mifangaroharo be ihany ireo mpankafy an'i Cui tany anaty media sosialy Shinoa. Raha maro no mihevitra hoe mety ho fotoana iray tsara fanararaotra io mba hiroboroboan'ny “rock and roll” ao Shina, ny sasany kosa malahelo amin'ny fidiran'i Cui aminà seho miendrika fampielezankevitra izay mety hanimba ny fanahin'ny “rock and roll”
Ao amin'ny Sina Weibo, tranonkala malaza indrindra amin'ny fitorahana bilaogy kiritika ao Shina, nanoratra i [zh] “Han Haoyue” hoe:
Midika fisokafan'ny resaka ideolojia ny fisehoan'i Cui Jian ao amin'ny fetin-dohantaona. Ho fiverenan'ny “rock and roll” indray ao anatin'ny taona 2014, mila karazana tosika avy amin'ny rock ny kilasin'ny mpiasa izay efa likiliky, hanosika indray ny “rock” ho eo anivon'ny fialamboly ny fanehoan-kevitra matanjaka avy amin'ny vahoaka
Nandà anefa ny sasany. “Paihuan de Suiliang” nanoratra hoe [zh] :
乌托邦永远是小众的乐园。 一旦，它被主流接受很多事情将被改变，会被利用被捆绑，像美国就有很多这样的主流乐队。 摇滚终究属于操场和露天舞台，所以解决的办法是所有乐队一起上春晚，或者直接把春晚改成迷笛。
Mandrakariva ny nofinofy tsy hay tanterahana dia an'ny vitsy an'isa ihany. Vantany vao neken'ireo fampahalalam-baovao mahazatra ny “rock”, dia efa akàny tombontsoa sy feheziny, toy ireo tarika tranainy any Etazonia ihany. Mety ho an'ny sehatra mihidy an'olon-tsotra na banja malalaka ny Rock, noho izany ny ala olana dia ny fanantevenan'ny tarika rehetra an'ilay fetin'ny lohataona, na manova miandàlana ilay seho ho lasa Fetiben'ny Mozika Midi.
Nampita toe-po tahaka izany i “Xin Changzheng Lushang” :
Endriky ny fotoana i Cui Jian, nefa toa tsy mifanaraka amin'ity seho ity ireo hirany. Tsy maneho hafanana na marimarira iraisana ireo hiran'i Cui Jian, somary milaza hery, alahelo, eritreritra, fa tsy zavatra izay azon'ilay fetin-dohantaona folahana sy fehezina
Ho an'ny maro amin'ny mpankafy, te-hahita an'i Cui fotsiny hiaka-tsehatra izy ireo. Nanoratra i “Chibuzhe tiefanwan” :
Voalohany indrindra, tsy dia misy dikany ho an'ny fivoaran'ny mozika “rock” ny fiakarana an-tsehatr'i Cui Jian ao amin'ny fetin-dohantaona. Tena kianja politika tanteraka ny seho rehefa fetin-dohantaona, izay tsy mifanaraka velively amin'ny “rock and roll”. Faharoa, ny olana amin'ny fifantenana ireo hira, miainga amin'ny fandraràna efa ho ampolo taonany maro ka tonga hatraty amin'ny fanasàna hiaka-tsekatra amin'ilay fety, hanetry ny fanahin'ny fanoherana sy ny hery mpanakiana. Kanefa, iray isan'ny mahafinaritra mandrakariva ny fiheverana hahita an'i Cui Jian amin'ny fahitalavitra
Nanahy loza sahady i “Gu feng” :
Raha tsy tsara ny ataon'i Cui Jian amin'ilay fety, dia ho sivana sy fanimbàna tena ataon'ireo tarika mpanao “rock” izany. Ho ampaham-piainan'ny “rock” Shinoa ny fanaovana kajikajy, marimaritra, ary ny fijerena ny elanelam-panahy, raha hijanona lavitry ny “rock” kosa ny fanehoana, ny famoahana ny fihetseham-po mivaivay, ary ireo kasinga fototr'aina, efa eo rahateo ny laza sy ny fahalinan'ny Antoko [Kaominista Shinoa]. Avy eo isika tsy handre afa-tsy ny rock ankosotra sisa fa tsy ilay rock toy ny endri-piainana. Azonao sary an-tsaina ve hoe andian'olona lava volo sy mitafy akanjo hoditra lavabe mankalaza ny firenentsika ao amin'ny sehatry ny [Fahitalavitra Foibe ao Shina] ?
Jereo ny iray amin'ireo hiran'i Cui Jian “A piece of red cloth”